ग्रीन लालटेन |
हामी सबै हाम्रो हास्य पुस्तक नायक धेरै माया. वर्षौंदेखि, our heroes have jumped out of our comic books into films, भिडियो र भिडियो खेल. हास्य पुस्तक नायक को यस प्रभाव बाहिर बायाँ छैन अनलाइन स्लट खेल संसारका छ गर्न सकिन्छ. फलस्वरूप, Nyx डीसी हास्य नै नाम डीसी गरेको प्रसिद्ध हास्य पुस्तक नायक को एक को सम्मान मा ग्रीन लालटेन स्लट खेल विकसित गरेको छ.
ग्रीन लालटेन स्लट को विकासकर्ता बारे
Nyx डीसी हास्य लोकप्रिय विकासकर्ता लागि अभिभावक कम्पनी हो — NextGen. यो वर्तमान स्लट सर्वश्रेष्ठ स्लट बोनस साइट हुन हुन्छ जो बीच वर्ष हास्य-आधारित खेल को धेरै सिर्जना गरेको छ.
ग्रीन लालटेन पाँच रील दावा कि सर्वश्रेष्ठ स्लट बोनस साइट छ, चार पङ्क्ति र पचास वैकल्पिक paylines को कुल. आफ्नो भाग्य माथि छ भन्ने लाग्छ भने, तपाईं सक्रिय paylines संख्या कम गर्न स्वतन्त्रता छन् सर्वश्रेष्ठ स्लट बोनस साइट खेल.
यो खेल को डिजाइन हास्य-पुस्तक डिजाइन को स्मरण गराउन भनेर एक छ. पृष्ठभूमिमा युद्धमा दृश्य सधैं थप साहसिक र रमाइलो लागि रेसिंग आफ्नो एड्रेनालाईन राख्न पक्का छ भनेर छ.
यो खेल मा जंगली टी नजिकको अप दृश्य छउहाँले ग्रीन लालटेन कार्य मा. यो स्क्याटर हाम्रो नायक आफ्नो विशेष शक्तिहरु दिन्छ कि घन्टी छ. जङ्गली मात्र स्लट खेलको दोस्रो र चौथो रील मा देखिन्छ र यो तपाईँको संयोजन युगल.
यो खेल मा बोनस सुविधाहरू बोनस बेट सुविधाहरू र रिङ विशेषताहरु छन्. The Bonus Bet feature is used to activate the ring features and it has its own special addition to your reward. यो घन्टी सुविधा हाम्रो नायक र आफ्नो nemesis बीच झगडा सम्म जान्छ - Sinestro. आफ्नो हार अर्थ राख्छ गर्दा लागि कम पुरस्कार को लालटिन लागि विजय तपाईं लागि एक विशाल बोनस परिणाम थियो.
You will find the slot havingasufficiently decent gameplay, संलग्न रमाइलो तत्व मा एक औसत मूल्याङ्कन संग तर तपाईंले आफ्नो औंलाहरुमा राख्न निश्चित छ.